Ny sary sy ny tsipiriany momba ny OnePlus 3 dia mivoaka avy ao amin'ny TENAA | Androidsis
Ny OnePlus 3 dia mandeha amin'ny alàlan'ny TENAA miaraka amin'ny efijery 5,5 ″ FHD ary puce Snapdragon 820
Ny OnePlus 3 dia andrasana amin'ny fiandohan'ny volana Jona, fa alohan'ny fahatongavany amin'ny fomba ofisialy dia efa sahady isika mandray sary vaovao saika isan'andro. Iray amin'ireo telefaona andrasana amin'ny taona izay ahafahana miditra iray amin'ireo finday avo lenta ambany indrindra izay ahitana ny chip Qualcomm's Snapdragon 820.
Ny famoahana OnePlus 3 vaovao tonga avy any TENAA, ny masoivohon'ny lalàna mifehy ny Sinoa izay dingana farany alohan'ny fanambarana farany momba ny telefaona maro tonga avy any amin'ireo tany ireo. Avy amin'ny TENAA mihitsy no ahafahantsika miditra amin'ny sary vaovao sy ny famaritana an'ity telefaona OnePlus ity.
Ny fitaovana asehon'i TENAA dia toa mitovy ihany mitovy amin'ilay iray izay tafaporitsaka tato anatin'ny iray volana lasa izay. Izy io dia manana io vatana metaly io, ny taribia antena ao aorina, izay mahatonga azy ho toy ny iray amin'ireo HTCs, ary fakan-tsary aoriana izay hita ao amin'ny faritra afovoany no tena mahery fo. Ny bokotra volume ary koa ny bokotra moana dia eo amin'ny lafiny iray ary ny bokotra herinaratra amin'ny lafiny iray. Ny iray voalaza ho an'ny mpamaky ny rantsantanana dia miseho eo aloha.
Rehefa mandalo TENNA ianao dia midika koa izany fa miseho ny famaritana anao. Iray ireo 5,5 inch 1920 x 1080 fampisehoana AMOLED, Fakan-tsary 16 MP aoriana, fakan-tsary 8 MP, chip quad-core izay antenaina ho Snapdragon 820, 4 GB RAM, fitehirizana anatiny 64 GB ary bateria 3.000 mAh. Hendry ny rindrambaiko, ny OnePlus 3 dia tokony hanana Android 6.0.1.
Na dia manana ny toerany amin'ny tsaho isan-karazany aza ireo pitsipitsony rehetra, dia manamafy azy ireo ny fandalovana amin'ny TENAA. Ny OnePlus 3 dia tsy mitovy amin'ny smartphone hafa ao vy mifandraika, satria amin'izao fotoana izao dia ny fironana eken'ny mpanamboatra maro amin'ny famolavolana.
Ho hitantsika raha izany afaka manaraka ny vidiny ambany izay namoaka ny voalohany sy faharoa OnePlus.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ny OnePlus 3 dia mandeha amin'ny alàlan'ny TENAA miaraka amin'ny efijery 5,5 ″ FHD ary puce Snapdragon 820
Ny MotoMods, ny maodelin'ny Moto Z ho avy, dia voasivana
[APK] Sintomy sy apetraka ny Apollo sy ny DSP Manager, mpitendry mozika an'i Cyanogenmod ary mampitovy azy